Ganlọ ọrụ na-emepụta ahịhịa ndụ - China Organic Pigment Manufacturers, Suppliers
Agba agba 139
Agba Yellow 139 bụ ọbara ọbara ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara, na nhazi nhazi dị mma, nghọta dị elu, nguzogide ọkụ dị mma na ịdị ngwa ọkụ. Nguzogide ọkụ na HDPE nwere ike ịbụ 250 ℃, mana ọ ga-agbasasị n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ karịa 250 ℃. Ọ na-egosi ezigbo nguzogide nguzo na PVC mgbanwe. Nwere ike ịbụ ezigbo nnweta edo edo.
Ihe ya na ya bu YELLOW K1841 / novoperm yellow M2R / YELLOW L2140 / YELLOW H1R, nke enyere ka eji ya mee ihe na PP PE ABS PVC plastik, mbiputa na mkpuchi, akwa BCF na eriri PP.
Anyị na-enyekwa Pigment Yellow 139 SPC na mono-masterbatch.
Uhie Red 149 bụ uhie na-acha uhie uhie, nke nwere ike agba dị elu. Ọ nwere nhazi nhazi dị mma, nguzogide ọkụ na ọkụ dị ọkụ.
Kwadoro maka eriri polyester (PET / terylene), PA fiber (chinlon), polypropylene fiber (PP fiber), PP HDPE PVC PS PET PA Plastic na engineering plastics.
Agba Yellow 180 bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo, nke nwere ikike ịgbasa ngwa ngwa, nguzogide ọkụ dị mma, ịdị ngwa ọkụ dị mma na ike agba dị elu. Ejiri dị ka agba odo odo.
O nha anya bu odo odo HG / Novoperm odo P-HG, nke enyere ka eji ya na PP PE ABS PVC plastik, mbiputa na mkpuchi, yarn BCF na fiber PP.
Anyị na-enyekwa Uhie Yellow 180 SPC na mono-masterbatch.
Agba odo 183
Ngwaahịa: Aha aha: Yellow Yellow 3RP Agba Index: Agba Yellow 183 CINo. 18792 CAS Nke 65212-77-3 EC Nke 265-634-4 Chemical Nature: Mono azo Chemical Formula C16H10CaCl2N4O7S2 Njirimara Teknụzụ: Acha uhie uhie na-acha uhie uhie, na ezigbo nguzogide ọkụ ...
Agba agba 181
Nkọwa ngwaahịa: Aha ngwaahịa Benzimidazolone Yellow H3R Color Index Pigment Yellow 181 CI Nke 11777 CAS 74441-05-7 EINECS NO. 277-873-1 Chemical Group Benzimidazolone Njirimara Nka na ụzụ: A-acha ọbara ọbara odo ntụ ntụ, na mfe-dispersing, magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide, ezi ìhè ngwa ngwa na h ...
Agba odo 168
Ngwaahịa: Aha aha: Yellow Yellow GRP Agba Index: Agba Yellow 168 CINo. 13960 CAS Nke 71832-85-4 EC Nke 276-057-2 Chemical Nature: Mono azo Chemical Formula C32H24CaCl2N8O14S2 Njirimara Teknụzụ: Azụ ntụ na-acha odo odo, nke nwere ezigbo ọkụ ọkụ na ...
Agba odo 155
Ngwaahịa: Aha aha: Yellow 3GP Agba agba agba: Agba odo odo 155 CINo. 200310 CAS Nke 68516-73-4 EC Nke 271-176-6 Chemical Nature: Dis azo Chemical Formula C34H32N6O12 Teknụzụ Nka na ụzụ: A na-acha odo odo na-acha odo odo, nwere ezigbo nguzogide ọkụ na exc ...
Agba odo 154
Ngwaahịa: Aha ngwaahịa: Yellow Yellow H3G Agba Index: Agba Yellow 154 CINo. 11781 CAS Nke 68134-22-5 EC Nke 268-734-6 Chemical Nature: Benzimidazolone Chemical Formula C18H14F3N5O3 Teknụzụ Njirimara: A na-acha ntụ ntụ na-acha odo odo, nke nwere agba dị elu ...
Agba agba 151
Ngwaahịa: Aha aha: Yellow Yellow H4G Agba Index: Agba Yellow 151 CINo. 13980 CAS Nke 31837-42-0 EC Nke 250-830-4 Chemical Nature: Benzimidazolone Chemical Formula C18H15N5O5 Technical Properties: A greenish odo pigmenti ntụ ntụ, na elu na agba streng ...